Malunga nathi-iDezhou Dongyu Plastic Packaging Co., Ltd.
Ngaphezu kweminyaka engama-20 yobuchwephesha beplastiki eninzi, sinolwazi kunye namava asenza sibe ngababoneleli beengxowa zeplastiki abakhokelayo kushishino.Sizama ukuqinisekisa ukuba ingxowa yethu yepoly kunye neemveliso zeplastiki azifezekisi iimfuno zakho kuphela kodwa zigqithise ubulindele.I-Dezhou Dongyu Plastic & Packaging Co., Ltd. igxile ekuveliseni zonke iintlobo zeengxowa zokupakisha zeplastiki.Ngezixhobo eziphambili kunye neqela labasebenzi abaziingcali kunye nobugcisa, lishishini langoku elidibanisa ishishini kunye norhwebo.Inkampani ngoku inendawo yokusebenzela eqhelekileyo kunye nendawo yokugcina impahla enendawo yeemitha ezizikwemitha ezingama-2,000 kunye nabasebenzi abangama-50-100.Kukho oomatshini bokuvuthela ifilim zeplastiki abangama-20, abangaphezulu kwama-30 abaqhubeka besenza oomatshini, ukutywina kunye noomatshini bokusika kunye noomatshini bokushicilela abali-10.Umthamo wonyaka wemveliso ufikelela kwiitoni ezingama-4000.Ubukhulu becala sivelisa iinkcukacha ezahlukeneyo zeebhegi zevest, iibhegi ezisicaba, iibhegi eziqengqelekayo, iingxowa ezisicaba, iingxowa zokuphatha, iingxowa zesonka, iingxowa zenkunkuma ezingama-20%, iingxowa zenkunkuma yezilwanyana, amalaphu etafile alahlwayo, iibhegi ze-ziplock, imiqulu yefilimu, njl.njl. kuba iimveliso ziseMntla Melika, eMzantsi Melika, eYurophu naseAfrika.
Isilogeni / umbono / emva kwenkonzo yokuthengisa
Isilogeni senkampani yethu sithi: "Ingqibelelo sisiseko, umgangatho kuqala". Inkampani yethu iseke inkqubo yokulandelela umgangatho wemveliso yabasebenzi. Abasebenzi abakhethekileyo baya kuhlola umgangatho wemveliso. Zonke iimveliso ezikumgangatho ophantsi ziphathwa njengemveliso yenkunkuma. Ukuba kukho naziphi na iimveliso ezikumgangatho ophantsi zifunyenwe emva kokuba umthengi efumene iimpahla. Sinenkonzo emva kokuthengisa. Ngalo lonke ixesha ufumana iimpahla zingaphelanga iintsuku ezingama-30, siya kukwenza utyelelo lokubuyela.Oku kuya kwenza utshintsho olungcono kwiodolo yakho elandelayo.
Umbono wenkampani yethu kukusebenzela wonke umthengi kakuhle kwaye uphumelele ukuqondwa kwabathengi ngomgangatho kunye nemfezeko.Ukusuka kubathengi ukuya kubahlobo abangcono.
Malunga nenkonzo emva kokuthengisa.Emva kokuba ukhuphe ubungqina obubambekayo.Siza kuthethathethana ngembuyekezo ngokukhawuleza.Ayonakalisi umdla wakho.Kwaye ukurekhoda nokuxoxa.Ukuthintela iingxaki eziphindaphindiweyo zomgangatho wemveliso.
Wanga ungasinika ithuba.
Siza kusebenzisa izenzo ezisebenzayo ukukuxelela ukuba silungile ukukhetha.